Barcelona waa kooxda seddexaad ee ugu fiican Champions League…. (Kaalintee ayey kaga jirtaa Real Madrid?) – Gool FM
Barcelona waa kooxda seddexaad ee ugu fiican Champions League…. (Kaalintee ayey kaga jirtaa Real Madrid?)
Dajiye April 20, 2020
(Yurub) 20 Abril 2020. Wargeyksa “Sport” ee dalka Spain ayaa tooshka ku ifiyay darajooyinka ay ku kala jiraan heerka kala sareynta kooxaha ee tartanka Champions League, sida ku cad codeyn rasmiga ah oo ay ansixiyeen Xiriirka Kubadda Cagta Yurub ee (UEFA).
Barcelona ayaa ku jirta kaalinta seddexaad kala sareyntan, taasoo kuxiran natiijooyinka koox kasta oo ka ciyaarta horyaallada Yurub shantii sano ee la soo dhaafay, kaddib markii ay gaartay wareega quarter-finalka 3 jeer, iyo semi-finalka oo hal jeer ah, halka aysan wali dhaafin wareega 16-ka xilli ciyaareedkan.
Barcelona ayaa heshay 124 kun oo dhibcood intii lagu guda jiray shantii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, halka xilli ciyaareedkan ay heysato 20 kun oo dhibcood ilaa iyo haatan, kaddib markii ay gaartay 4 guul iyo 3 barbaro ah, iyadoo aan wali wax guuldarro ah la kulmin.
Real Madrid ayaa kaalinta koowaad ka gashay qiimeyntan rasmiga ah oo ay sameysay UEFA iyadoo leh 134 kun oo dhibcood, taasoo wax iska caadi ah, maadaama ay koobka Champions League ku guuleysteen saddex jeer xiriir ah, shantii sano ee lasoo dhaafay.
Haddaba dhanka hoose kaga boggo liiska kala sarreynta kooxaha Champions League, kaddib qiimeyn la sameeyay:
Real Madrid: 134 kun dhibcood
Atletico Madrid: 126 kun dhibcood
Barcelona: 124 kun oo dhibcood
Bayern Munich: 123 kun dhibcood
Juventus: 115 kun oo dhibcood
Manchester City: 112 kun oo dhibcood
Paris Saint-Germain: 105 kun oo dhibcood
Liverpool: 99 kun dhibcood
Manchester United: 92 kun oo dhibcood
Arsenal: 91 kun oo dhibcood.
PSG oo wali Barcelona kula jirto dagaal ka dhan ah Neymar… (Maxay markan damacsan tahay?)
Wargeyska France Football oo tilmaamay kooxda uu jeclaan lahaa inuu ku biiro Sadio Mane, haddii uu ka tago Liverpool